बिना आयरन कसरी लोभ - 1aviagem.com
अघिल्लो पोस्ट: फिलिपिन्सबाट के आशा गर्ने? एक फिलिपिनो द्वारा
अर्को पोष्ट: बर्लिनमा सुझावहरू - जर्मनी - १० ठाउँहरू
पोष्ट गरिएको 14 फेब्रुअरी 2019 द्वारा रोमोमो लुकाना
सबैलाई नमस्कार, आज एक द्रुत टिप हो कि प्रत्येक पहिलो पटक ब्याकप्याकर जान पर्छ। जब तपाइँ एक ब्याकप्याकमा तपाईंको सबै लुगा लगाउनुहुन्छ, सूटकेस, वा सामान धेरै पटक यो समाप्त हुन्छ सबै कुरै भएन। र यदि तपाईंले एक्लै सामानको साथमा सम्भव भए वा हल्का रूपमा हल्का यात्रा गर्नुभयो भने, तपाईसँग सम्भवतः फलाम छैन, के तपाइँ?
र अब, मेरो कपडा बिना आयरन कसरी डम्प्न सक्छु?
शान्त छ, सबै चीज हराएको छैन। अधिक होटल र हस्टल एक हेयर ड्रायर प्रदान गर्दछ। र यो उहाँसँग छ कि कपडाहरू हटाउन सम्भव छ।
टिपमा तातो हावा प्रयोग गर्न र हातबाट फैलाउनु भनेको कपडा हटाउनु हो। यदि त्यसो भए, तपाईं थोडा घृणा गर्न सक्नुहुनेछ।
सारांशमा यो छ: हावा पवन + हल्का टग हातले र तयार छ तपाईसँग पहिल्यै केहि मिनेटमा अंडरवियर छ।
तलको भिडियोमा यो कसरी गर्ने भनेर देखाउँछ।
यदि तपाईंले यो टिप मनपर्यो भने, यसलाई यहाँबाट आनन्द लिनुहोस् र यसलाई साझा गर्नुहोस्।
धन्यवाद। (थप सुझावका लागि र कथाहरू तल हाम्रो नक्सामा पहुँच गर्दछ।
कसरी विगतको कपडा